We.com.mm - အမြန်လမ်းမှာ လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ ဒုရဲအုပ် ကားတိုက်ခံရ၍သေဆုံးတဲ့အပြင် အမှုပါဖွင်ခံရ
အမြန်လမ်းမှာ လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ ဒုရဲအုပ် ကားတိုက်ခံရ၍သေဆုံးတဲ့အပြင် အမှုပါဖွင်ခံရ
ယမန်နေ့ ဇွန်လ (၉)ရက်နေ့ ည(၁၀း၃၀)မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် ရန်ကုန် - နေပြည်တော် အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် (၁၅၈)မိုင် အနီးရှိ စမိုးရဲကင်းမှ ဒုရဲအုပ် ဦး ……………. ဟာ တစ်ဖက်ကားလမ်း ဈေးဆိုင်မှ ထမင်းစားပြီး ပြန်အလာ လမ်းဖြတ်ကူးစဉ် ကားတိုက်ခံရပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်ကို မောင်းနှင်လာတဲ့ Honda. FIT အနက်ရောင်ယာဉ်ကို ဦး ………………. (၃၅)နှစ်၊ ရွှေပြည်သာနေထိုင်သူက မောင်းနှင်လာတာဖြစ်ပြီး မတော်တဆတိုက်မိရာမှ ဒုရဲအုပ် ဦး ……………. ဟာ နေရာမှာပဲ သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်အရ ယာဉ်မောင်းကို အမှုမဖွင့်ထားဘဲ သေဆုံးသူ ဒုရဲအုပ် ဦး ……………. ကိုသာ အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ အမြန်လမ်းဥပဒေပုဒ်မ(၁၃)မှာ ပါတဲ့အတိုင်း ယာဉ်မောင်းဟာ စည်းစနစ်တကျမောင်းနှင်လာတာဖြစ်ပြီး တာဝန်မှအပ အမြန်လမ်းမပေါ် ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မရှိတဲ့အချိန် ဒုရဲအုပ်က ဖြတ်သန်းသွားလာခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တာဝန်ချိန်ပြင်ပမှာ အမြန်လမ်းမပေါ် ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ ဒုရဲအုပ် ဦး ……………. ကိုသာ အမြန်လမ်းမကြီး ဥပဒေနဲ့ အညီ အမှုဖွင့်ထားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးမှာ ကားတွေ အရှိန်နဲ့ မောင်းနှင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ လူတွေ၊ လှည်းတွေကို ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ တကယ်လို့ အမြန်လမ်းပေါ်မှာ လူ၊ လှည်း၊ အနှေးယာဉ်တို့ ဖြတ်သန်းသွားလာရင်း တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင် သွားလာတဲ့သူရဲ့ အမှားလို့လည်း သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ ဒုရဲအုပ် ဦး ……………. ရဲ့ အလောင်းကို တောင်ငူဆေးရုံကြီးကို ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတင်းဓါတ်ပုံ – အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုးရုံ
အမျိုးသမီးတွေအတွက် အရမ်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ စိတ်ကြွဆေးတစ်မျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေ
Guardians of the Galaxy ရုပ်ရှင်ထဲက Rocket Raccoon ရှဉ့်ကလေး Oreo ကွယ်လွန်
လူမှားရလောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ဂျက်စပဲရိုးမင်းသားကြီး Johnny Depp
အလုပ်သမား လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကြေး လျောက်ထားနိုင်ပါပြီ
"ဗမာလား မြန်မာလား” လက်ကမ်းစာများကို ဗကသကျောင်းသားများ ဝေငှ